Izindaba - Isixazululo Sokusika I-Laser Kwipayipi Yezimoto Ezihamba Ngezimoto
Isixazululo Sokusika Kwe-Laser Kwipayipi Yezimoto Ezihamba Ngezimoto
Isixazululo Sokusika I-Laser Kwesiphambano Sezimoto Ezihamba Ngaphambili EKorea Ividiyo
Imishini yokusika i-fiber laser tube inenzuzo ehlukile yokucubungula imishayo (imishayo yokuwela yezimoto) ngoba iyizinto eziyinkimbinkimbi ezenza iqhaza elibambekayo ekusimeni nasekuphepheni kwayo yonke imoto ebasebenzisayo. Ngakho-ke ikhwalithi yomkhiqizo ophelile ibaluleke kakhulu. Njengemishayo engaphakathi emotweni, bayaqinisekisa ukuthi abacindezeli igumbi labagibeli uma kwenzeka kushayisana uhlangothi. Imishayo yeCross Car nayo isekela isiteringi, ama-airbag, nayo yonke ideshibhodi. Ngokuya ngemodeli, singakwazi ukukhiqiza le nto eyinhloko kusuka ensimbi noma i-aluminium, futhi umshini wokusika we-laser wenza kahle ngokusika lezi zinto.
IHyundai Motor Company iyinkampani edumile yezimoto eKorea, ezibophezele ekubeni nguzakwethu osaphila ezimotweni nakwezinye izindawo. Le nkampani - ehola iHyundai Motor Group, isakhiwo sebhizinisi esisha esikwazi ukusabalalisa izinsizakusebenza zisuka ensimbi encibilikisiwe ziya ezimotweni eziqediwe. Ukwenza ngcono ukusebenza kwabo kahle kokukhiqiza nokuthuthukisa imishini yabo, inkampani yanquma ukwethula umshini wokusika we-pipe laser.
1. Umkhiqizo wekhasimende uyipayipi lomkhakha wezimoto, futhi udinga ukucubungula okukhulu nokuzenzekelayo.
2. Pipe ubukhulu kuyinto 25a-75A
3. siphelile ipayipi Ubude 1.5m
4. Ubude bepayipi eliqediwe ngu-8m
5. Ngemva laser cutting, ucela ukuthi ingalo robot kungaba ngokuqondile ubambe ipayipi esiphelele ngoba eyalandela eguqa bese ucindezela ukucutshungulwa;
6. Customer izidingo laser cutting ukunemba kanye nokusebenza kahle, kanye esiphezulu processing speed akuyona esingaphansi 100 R / Wesilisa;
7. Isigaba ahlabayo akufanele ube Burr
8. Umbuthano osikiwe kufanele usondele kumbuthano ophelele
Isixazululo seGolden Laser
Ngemuva kokutadisha ngokucophelela, samisa iqembu elikhethekile lokucwaninga okubandakanya umnyango we-R & D nomphathi wethu wezokukhiqiza ukuthola isisombululo sezidingo zabo zokusika ugongolo lwezimoto.
Ngesisekelo P2060A, thina egcizelele eyodwa imodeli P2080A ipayipi laser cutting umshini ukuhlangabezana nezidingo zabo ahlabayo 8 ubude ipayipi kanye ukulayisha okuzenzakalelayo.
Ekupheleni kokuqoqwa kwezinto ezibonakalayo, ingeze ingalo eyodwa yerobhothi yokubamba ipayipi. Ukuqinisekisa ukusika ngokunemba, lonke ucezu olulodwa kufanele luboshwe ngokuqinile ngengalo yerobhothi ngaphambi kokusika.
Ngemuva kokusika, ingalo yerobhothi izoletha ipayipi kuzinqubo zakamuva zokucindezela nokugoba.
Izimbobo zepayipi lokugoba kufanele zinqunywe umshini wokusika we-robot .
Thola ngezifiso Isixazululo!
Njengoba ukwazi ukubona, kunezindlela eziningi zokusebenzisa i- Laser TUBE Cutting MACHINE ukubona umugqa wokukhiqiza othomathikhi. Futhi, manje sekuyisikhathi sokuthi uthole isisombululo sakho esenziwe ngokwezifiso futhi uhlole amathuba.